‘नो एमसीसी’ लेखेको बम भेटिएपछि हंगामा, केछ अवस्था ? — Sanchar Kendra
‘नो एमसीसी’ लेखेको बम भेटिएपछि हंगामा, केछ अवस्था ?
दाङ । दाङको पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत लमहीको सडक छेउ नकिजै प्रेसर कुकरमा तारले जेलिएको शंकास्पद वस्तु फेला परेको छ । लमही नगरपालिका वडा नम्बर-७ स्थित पदमिनी खोलाको २०० मिटरको दक्षिणतर्फ सडक छेउमा तार जोडेर राखिएको शंकास्पद प्रेसर कुकर फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
‘नो एमसीसी’ लेखिएको शंकास्पद वस्तु शनिबार राति ११ बजे सडक छेउमा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी उपरीक्षक सुरेशकुमार काफ्लेले जानकारी दिए ।
शंकास्पद वस्तु बम हुनसक्ने भन्दै नेपाली सेना निष्क्रय पार्न घटनास्थल पुगेको प्रहरी उपरीक्षक काफ्लेले बताए । ‘नेपाली सेनाका बम डिस्पोजल टोली पुगि डिस्पोज गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने ।
अहिले सेनाले निष्क्रिय पार्ने काम गरिरहेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग एकतर्फी खुला गरेर सवारी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसअघि काठमाडौंको ढुंगेअड्डामा ब’म फेला परेको थियो । प्रहरीले पनि शंकास्पद बस्तु भेटिएको पुस्टि गरेको थियो।
देउवा सरकारले एमसीसी टेबल गर्ने तयारी गरिरहँदा त्यसको चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ भने विप्लव नेकपा, नेकपा मसालसहितका बिभिन्न राजनीतिक दलहरुले सडक तताएका छन । जसकारण बालुवाटारमा समेत छुट्टै तरंग पैदा भएको र प्रधानमन्त्री देउवा चौतर्फी दवावमा परेको बुझिएको छ ।